Thwebula Hangouts 14.0.136618992 isizulu – Vessoft
Inethiwekhi Yokuxhumana, Ukukhulumisana Voice, Ewebhu
Hangouts – a isofthiwe ethandwa ukushintshanisa imiyalezo futhi izwi noma video bizo. Isofthiwe kuhlanganisa ezihlukahlukene izici, ezifana search lula abasebenzisi, ukukhulumisana izingxoxo group, exchange of amafayela, ukushicilela kwamarekhodi ehlukahlukene nokunye Hangouts ikuvumela ukuba adale futhi ukuxhumana in izingqungquthela zamavidiyo nabasebenzisi abaningi. Isofthiwe futhi baxhumana izicelo eziningi ezivela service Google and ngokuzenzakalelayo synchronizes umlando izincwadi kumadivayisi ezahlukene. Hangouts kuhlanganisa amathuluzi ahlukahlukene ukulungisa software izidingo umsebenzisi.
Voice and video bizo
Inkomfa Isiqophi nabasebenzisi abaningi
Ukuvumelanisa of izingxoxo kumadivayisi ezahlukene
The nokuxhumana software ahlukahlukene Google
Amazwana on Hangouts:
Hangouts Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... imo 9.8.000000003781
Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ine ukufinyelela omunye ethandwa kakhulu umculo amasevisi. Isicelo kwenza ukulandela izindaba emhlabeni umculo baseshe lawo marekhodi ehlukahlukene audio.